Siyoyika nge-Impatient kwi-Psychiatric PSVR | Iindaba zeGajethi
I-PlayStation iseMadrid isenza ukukhuthaza i-PS VR, kuba le isebenzise indlela enomdla kakhulu xa ujongene nemihla yeHalloween esisandula ukuyidlula. Ukongeza, simangalisiwe kukuvavanya umdlalo onxibelelanayo we Izinto ezingaqhelekanga 2 yePS VR. Namhlanje ekuseni siye kwi-Psychiatric PlayStation VR ukuvavanya Ukuphelelwa ngumonde, isihloko sokwesaba kwengqondo kwi-PS VR kwaye samangaliswa.
Ukongeza, i-PlayStation Plus ibhengeze izaphulelo eziphindwe kabini eziza kuhlala zinje kude kube phakathi ku-Novemba.Makhe sijonge ezona ndaba zisilungiselele zona uSony.
Njengamaxesha onke, useto belumnandi, ngalo lonke ixesha ukusuka ekungeneni kumnyhadala iqela labadlali elikwenzileyo ukuze uhlale unolwazi kwaye ungene ngokupheleleyo kwisibhedlele sabagula ngengqondo, uzenza ngathi ngabalinganiswa esiza kubona kamva kubo Ukuphelelwa ngumonde. Nje ukuba singene kwi-PS VR sikwazile ukuvavanya idemo yalo mdlalo wevidiyo omnandi oya kuthi ulumkise zonke izivamvo zethu, uloyiko lwengqondo kunye neengxoxo ezisebenza kakuhle, ikamva liya kuxhomekeka kwizigqibo zethu, ayingomdlalo uvaliwe umgca wento esikwazileyo ukuyiqinisekisa. Umnxeba wokuqala wokunxibelelana nalo mdlalo wevidiyo ubumnandi, ngaphandle kwamathandabuzo inokuba yindawo elungileyo yokuHlala kwabaSebenzi 7 kwiPSVR.
Izaphulelo ezibini kwivenkile ye PlayStation
Ukongeza, u-Sony ubhengeze izaphulelo eziphindwe kabini kwi-PlayStation, umzekelo siya kuba nakho ukufumana i-PES 2018 ngesaphulelo esipheleleyo se-20% esishiya kwi-47,99 euros iyonke. Ikwahamba neenguqulelo ezimbini ze-Kingdom Hearts, i-1.5 + 2.5 Remix kunye ne-2.8 kwi-HD ye-39,99 kunye ne-47,99 ye-euro ngokwahlukeneyo, amathuba amabini alungileyo. I-Grand Theft Auto V ikwafumana isaphulelo esibalulekileyo se-30%, isibonelelo esinomdla somdlalo onjalo ophumeleleyo. Into elungileyo kukuba ume ngeVenkile yePS kwaye uzibonele ngokwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I zi ganeko » Siyoyika nge-Impatient kwi-Psychiatric PSVR
Ividiyo evuzayo yeHTC U11 Plus enkulu
Iingxaki ezintsha zeApple Watch Series 3